Sida saameynya ugu leeyahay ganacsatada xeeladaha dhaca daah-soon – SOMA: Somali Media Association
Sida saameynya ugu leeyahay ganacsatada xeeladaha dhaca daah-soon
In hanti qof leeyahay looga dhaco hab xirfadeysan waa mid aan ku cusbeyn magaalada, hayeshee waa mid saameysay ganacsatada oo ku waayay lacago iyo badeecooyin ay iibiyaan.
Axmed Cumar waxa uu ka ganacsadaa tukaan uu ku iibiyo bagaagshka iyo raashiinka quutul daruuriga ah oo ku yaala dagmada Dharkenley, bilowgii bishan Janaury waxaa laga dhacay lacag cadadeedu ku dhowdahay 500 oo doolar xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi. kaddib markii ruux watay gaari raaxo ah uu ku soo ag baakimay goobtiisa ganacsi islamarkaana sida uu tilmaamay uu ruuxaasi indho sarcaadiyay.
Lacagaha laga qaatay Axmed oo uu damacsanaa in uu dib u galiyo Ganacsiga si uu u yeesho Waxsoo saar fiican, ayaa u muuqanaya hadda in uu kasoo kabanayo, kaddib lacago deyn ah oo uu qaatay.
” Wuxuu ahaa nin labisan oo ka soo degay gaari, goobteyda ganacsi ayuu iigu soo galay, salaan gacanta ah kaddib, waan miir daboolmay sababtoo ah waxba kala ma ogeyn, Ninkii wuxuu qaatay lacag shiling Soomaali gaareysa seddex malyan iyo lacag dolar ah oo cadadeedu dhan tahay 400 oo dolar, taas oo ay la haayeen macaamiisheyda, khasaarahaas i gaaray hadda waan ka soo kabanayaa Allxamdulilah”.
Dabinnadaas lagula kaco ganacsatada, waxaa ka bad-baada tiro ka mid ah oo maqla dhacdooyinkaas kaddibna muujiya feejignaan dheeri ah si aysan ugu dhacin.
Farxaan Daahir, waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada iibisa Shobinka iyo qalabka electronics-ka ee Muqdisho, waxa uu 10 bishan ka bad-baaday isku day looga beddelan rabay Simcard-ka taleefankiisa kaddib markii uu u yimid ruux iska dhigayay in uu ka wax iibsan rabo.
Waxa uu sheegayaa Farxaan in xilligaas uusan qof u adeegeynin, taas oo ka caawisay in dareenkiisa oo jooga, & shaki ninka ka galay ay sababtay in uu ka qaato Taleefoonka, dabadeedna loo sheegay in ninka u yimid uu ahaa ruux dadka lacagaha ka dirta.
” Qof ayaa kuu imaanaya oo iska dhigaya mid wax kaa iibsanaaya, wuxuu kugu dayayaa xatooyo,maalin dhaweyd ruux aan muuqaalkiisa laga shakineyn ayaa ii yimid waxa uu iga dalbaday dhowr alaabood oo aan iibiyo markii aan u diyaariyay dhammaantood ayuu iga dalbaday taleefankeyga inan u dhiibo si uu u gashto Simcard-kiisa kaddib markii uu ka damay taleefankiisa oo aheyd arrin been ah, si kasta ugu dambeyn waan ku fahmay waxa uu damacsanaa”.
Dabinnada iyo indho sarcaadinta xatooyada ah waxaa sido kale la kulma bulshada sida waayeelka qaar oo la kulma shaqsiyaad iska dhiga in ay ka rabaan in ay u duceyaan ama ay wardi u aqriyaan sidaasna ay isaga dhigaan qof taleefankooda lacag ugu tuuraya.
Muxidiin Maxamed oo ah Todobaatan jir ka yimid Miyiga, ayaa ku dhacay dabin ah, in lacago uu haystay laga qaato waliba si xirfadeysan, iyadoo loo sheegay in laga doonayo, in Qur’aan uu saaro boos la dhex geeyey, sida uu SOMA u sheegay Mustaf Hashim oo ah wiil uu adeer u yahay.
” Adeerka waxa uu ka mid yimid Miyiga, isaga oo fadhiya banaanka guriya ayaa waxaa u yimid ruux watay gaari raaxada ah salaan kaddib, waxa uu adeerka way diiyay in uu yaqaano Qur’aanka, wuxuuna ugu jawaabay waan aqaanaa, wuxuuna ka dalbaday in uu boos uu leeyahay wardi ku aqriyo, kaddibna uu siin doono qidmad lacag ah, isaga oo ku yiri, waxaan kuu tuurayaa 300 oo dolar balse hadii ay lacag kuugu jirto ma soo gali karto ilaa laga bixiyo lacagta ee hadii ay lacag kugu jirto soo sarifo si aan tan kugu shubo, lacagtii ayuu soo sariftay, kaddib gaarigii ayay wada raaceen waxayna u dhaqaaqeen booskii si Qur’aan loogu aqriyo, adeerka iyo Ninkii ayaa ka soo degay gaariga markii ay yimadeen booskii ninka sheegayay kaddib adeerkii wuxuu bilaabay Qur’aankii Ninkiina wuxuu u sheegay in meel dhaw uu gaarayo kaddibna uu ugu imaanayo booska inta uusan dhameyn Qur’aanka, Lacagtii sarifneyd ee adeerkana sidaas uu ninkii kula tagay”.
Hababkaas lagu u gaarsado hantida dadka waxaa caadiyan fuliya dad ay shaqo u noqotay madama si maalinle ah ay uga dhex-dhacdo bulshada.
WQ: Maxamed-Qadar Cabdi oo ka tirsan Radio Himilo.
Haween loo diiday Shaqooyin ay ka dabari jireen nolosha & waxbarashada caruurtooda
Maxaa ka dhalan kara go’aanka DFS ku qabaneyso doorashada?